Dharka clothes Dharka shaqeynta • Xirfadlaha kombiyuutarka ee P&M
Guud ahaan Waxaa loo adeegsadaa warshado badan, kala duwanaanshahoodu wuxuu ka dhigayaa kuwo ku habboon jagooyin kala duwan, labadaba halka lagu talin karo iyo noocyada caagga ahba.
Suudhka waxaa loo isticmaali karaa beddel ahaan sweatshirts i surwaal. Waad ku mahadsan tahay, waxaad ka difaaci kartaa jirka oo dhan iyo dharka gaarka loo leeyahay waxyaalaha iyo wasakhda waxyeelada leh.
Ku habboonaanta iyo raaxada, soo saarayaasha badan waxay isticmaalaan xalal dheeri ah, sida walxaha taageeraya suudka gacmaha, ka hortagga siibashada.
Dalabkeena waxaad ka heli doontaa guud ahaan dahaaraniyo waliba noocyo xagaaga oo dhuuban iyo dharka gaarka ah ee difaaca.
Tayada sare ee qalabku waxay damaanad qaadeysaa adkeysiga suudhka, iyo sidoo kale wareegga hawo ku filan, taas oo ka hortageysa dhidid badan.
Sababta ugu weyn suudhadhka shaqada waa in laga ilaaliyo dharka waxyeellada ama wasakhda, halka ujeeddada dharka la iska ilaaliyo laga ilaaliyo kiimikada ama dabka.
Waxaan nahay qaybiyaha ka mid ah noocyada dharka 3M, Dupont, Leber & Hollman, Reis iyo cusbi. Qaar ka mid ah xirmooyinka ayaa lagu qanciyay jeebabka jilbaha taas oo u oggolaaneysa rakibidda suufka jilibka ee shaqo dheer inta jilbaha la dhigaayo. Dharka ayaa ka samaysan dunyo la xoojiyay meelaha ugu xasaasisan.
Guud ahaan xagaaga
Kala duwanaanshaha heerkulka shaqeynaya awgood shaqo guudkuwaas oo ka sameysnaa waxyaabo hawo leh oo u oggolaanaya xorriyadda dhaqdhaqaaqa, xaddidaya dhididka daran inta lagu jiro shaqada jirka. Dharka noocan oo kale ah ayaa ku habboon shaqada seminaaro baabuurta, fiilooyinka, tuubbada tuubbada iyo kuwa kale - meel kasta oo ay ka jirto halista sare ee wasakheynta walxaha ay adag tahay in la iska dhaqo.
Qeybta xagaaga xagaaga waxaa kale oo jira noocyo aan boorka ka jabin, waa lagu dhameystiri karaa maaskaro ama koofiyad. Dharka kahortaga ah waxaa laga sameeyaa dhar tayo sare leh oo hubiya isticmaalka muddada-dheer. Tayo fiican, moodellada qaarkood waxay xoojiyeen tollooyin si looga ilaaliyo jeexitaanka iyo xoqitaanka. Waxaan sidoo kale leenahay moodello jeebabka taleefanka lagu tolay.
Guud ahaan jiilaalka
Guud ahaan shaqada jiilaalka waxay bedel u yihiin dharka caadiga ah ee shaqada oo ka kooban surwaal iyo dhogor. Faa'iidadooda ayaa ah nooca ka ilaaliya wasakhda udhaxeysa lakabyada shaqsiga. Waad ku mahadsan tahay isticmaalka qalabka isku dhafan ee habboon, ma aha mid aad u qaro weyn, taas oo u oggolaanaysa xorriyadda dhaqdhaqaaqa. Guud ahaan jiilaalka dalabkeenna waxaa sameeyay shirkadda Reis.
Isugeynta guud ee dahaarka ayaa laga sameeyay suuf leh iskudhaf polyester ah, oo waliba ay ku jiraan dahaadhka. Dhabarka waxaa lagu hodansiiyay caag gaar ah oo loogu talagalay xorriyadda dhaqdhaqaaqa wanaagsan. Moodooyinkan ayaa ugu habboon walxaha alxanka, waddooyinka dhisa, kuwa wax dhisa iyo shaqaalaha dhismaha ka shaqeeya. Guud ahaan waxaa lagu qalabeeyay jeebado kuu oggolaanaya inaad keydiso taleefan ama waxyaabo yaryar. Xargaha dhexda iyo gacmaha ayaa ka hortagaya inuu soo jiido marka aad dhaqaaqeyso. Moodooyinka qaar sidoo kale waxay leeyihiin jeebado suufka ah si loo yareeyo cadaadiska marka laga shaqeynayo jilbaha.
Dharka ka samaysan dharka aan dunta lahayn iyo balaastigga
Dacwadaha difaaca gaarka ah ee shirkadaha sida 3M ama Dupont ayaa loogu talagalay inay ka ilaaliso arrimaha waxyeelada leh. Dharka la bixiyay ayaa loogu talagalay min. rinjiyeyaasha, ugaarsadayaasha, iyo dadka la macaamilaya kiimikada adag. Intaa waxaa sii dheer, nabadgelyada awgeed, dacwadaha la xushay ayaa lagu heli karaa midabbo digniin ah. Waxaa loogu talagalay dadka ka shaqeeya meelaha caamka ah, xaaladaha cimilada adag ama habeenkii.
Dacwadaha difaaca gaarka ah waxay buuxinayaan heerarka looga baahan yahay Midowga Yurub ee lagu soo rogay dacwadaha ilaalinta. Dhar guud oo loogu talo galay xaaladaha adag ee shaqada ayaa ka ilaaliya walxaha kiimikada, qalabka shucaaca, boodhka iyo walxaha shucaaca. Qalab dheeri ah oo leh jiinyeer ayaa sahlaya in la xidho dharka.
Allegro shaqo guudhaweenka shaqadooda guudjajabyo hal-gabal ahshaqooyinka guud ee raggaguud ahaan roob-caddeynshaqo guudshaqo guud AllegroGuud ahaan shaqada Audiguud ahaan shaqada haweenkaGuud ahaan Gdyniajajabyo hal-gabal ahKrakow shaqooyin guudshaqooyinka guud ee raggaguud ahaan shaqada dahaaranOLX shaqooyin guudguud ahaan soo saarahashaqada alxanka guudshaqo gacan labaad ahshaqo guud Warsawguud ahaan daabacanguud ahaan shaqada jiilaalkashaqada guud ahaan ilaalintadharka ilaalinta dharka ereygadharka shaqada jabandhar loogu talagalay dharka shaqadadharka shaqada guud ahaanguud ahaan shaqada la isticmaalay